Gumaata Kaampaasii 7: Seenaa mana barumsaa Medikaalaa Yunvarsiitii Finfinneetti qabxii ol-aanaa galmaa'e - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, Abdi Desalegn
Dr. Sanyii Qajeelaan jedhama. Kaniin dhaladhee guddadhe Wallagga Hahaa magaalaa Naqamteetti. Mana barnoota ogummaa fayyaa ( Medical School) Yunivarsiitii Finfinneerraa qabxii guddaa 3.95 galameessuun eebbifameera.
Abbaan koo Barsiisaadha. Harmeen koo ammoo haadha warraa manaati. Takka takka shaayeefi buna nagaddi.
Obboleessaafi obboleettii tokkon qaba. Obboleessi koo hangafni ogummaa Poolisii keessa jira. Obboleettiin quxusuu koo taate ammoo barattuu kutaa 10/ffaati.
Naannoo Hospitaalaattin dhaladhee guddadhe waan ta'ef barumsa kana jalqabumaa qabee nan jaaladha ture.
Ijoollummaa kootti akka ijoollee baayyee wayitan guddadhu waaniin ta'uu barbaadu yoon himu Doktara fayyaan jedha malee waayee ogummaa kanaa hedduu hin beekun ture.
Jaalalli oogummaa kanaa kan na booji'e naannoo hospitaalaatti dhukkubsattoota hedduu yoon argu ta'us, waayee oogummaa kanaa haga tokko baree kaniin ogummaa kanatti makama jedhe yaaduu eegale yoon kutaa 9 baradhu ture.
Madda suuraa, Sanyii Qajeelaa
Yunivarsiitii Finfineettii mana barnootaa meedikaalaa irraa qabxii olaanaa 3.95 fiduun ka eebbifame Dr. Sanyii Qajeelaa
Barnoota sadarkaa tokkooffaa fi lammaffaa keessatti waggaa waggaatti qabxiin koo fooyya'aa fooyya'aadhuma deemaa ture.
Kutaan keessatti baru keessaa tokkoffaa inuman baha garuu dareelee jiran hunda keessaa tokkoffa bahaa hin turre. Sababni isaas ijoolleen na caalan turaniiru.
Qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaatti qabxii guddaa galmeesisee muummee barnoota meedikaalaa aragachuu danda'eera.
Turtii koo waggaa 6fi walakkaa Kaampasii
Akkuma beekamu barnootni 'Medicine' nama sodaachisa yeroo jalqabdu. Bal'aadhas. Gorsa barattootni muummee kanaa waggaa lama sadii nu dura jiran dhufanii nuu kennan hordofaa turre gara caalu. Ta'us garri jalqabaa ni ulfaata ture.
Yeroo keessa haala barumsaas haala qorannoos, haala itti shaakala hojjennus itti baraa deemne.
Barumsi 'Medicine' hundumatti ulfaata. Sababni isaas kreeditiin isaa guddaadha, takkaatti waanta hedduu of keessaa qaba yaadachuu si barbaachisa.
Barnoota kan yeroo barattu inni guddaan of jijjiiruu danda'uu qabda. Halli ittiin dubbistu tokko yoo ta'uu didu haala ittiin dubbistu jijjiiruun fooyya'uu dandeessa.
Aniis maluma kana fayyadamuunin fooyyeffachuu danda'e malee jalqabarratti cimaa ture.
'Kaampaasiin iddoo nama, nama guutuu godhee baasuu danda'uudha'
Mana barnootaa Meedikaalaa keessatti cimina barnootichaan kan hafe inni kaan baayyee gaariidha. Ijoolleen waliin barannuu hedduun isaanii ijoollee amala gaarii qaban, barnootas jaalataniidha.
Hedduun keenya amala tokko qabna hojii keenyas wal gargaarreedhuma hojjenna.
Kaampaasiin (mooraan barnootaa) nama itti bareef iddoo nama, nama goodhee baasuu danda'uudha.
Itti gaafatamummaa kee iddootti barattu, jireenya kee gara fuulduraa iddootti karoorfattu, ofirra dabartees namoota biroof ta'uu iddootti bartudha kaampasiin.
Kanaaf mooraan barnootaa nama guutuu ta'e tokko hojjechuudhaaf iddoo ta'udha jedheen yaada.
Amala barnootaa fi ogummaa kanaarraa kan ka'e kaampasii keessatti hariiroo jaalalaa keessa hin galle.
3.95 galmeesisuu akkamiin danda'e?
Mana barnootaa meedikaalaa hunda keessatti qabxiin kun isa guddaa fi isa jalqabaa ta'uu isaaf ani ragaa hin qabu. Qabxiilee kana dura galmaa'aniis wantan ilaale hin qabu.
Qabxii bara kanaa isa guddaa akka ta'e garuu beeka.
Milkaa'ina koof sababni inni jalqabaa gargaarsa waaqayyooti jedheen yaada. Itti aansuun barnoonni meedikaala waggaa 6 fi walakkaa fudhata murannoo guddaa barbaada.
Waggoota kana keessatti namni nuffee booddetti jechuu mala. Yoo osoo hin nuffiin itti fufiinsaan dubbifame qabxii guuddaa galmeessuun milkaahuun ni danda'ama.
Yeroo hirribaa gahaa dhabuun wayita gara shaakallii hojiitti galamu mudachuu danda'uun alattii karoora baasuun ni dubbifama yoo ta'e hirribaaf yeroon gaha inuma jiraata.
Dhaamsan barattootaaf qabu
Wanti hundumtuu dandeettii keessan irratti hundaa'a. Hundi keessan dandeettii gaarii qabdu, sammuu gaarii qabdu Waaqayyoo kanaan isin eebbiseera jedheen yaada.
Hasxaa Gumaata Kaampaasii
Inni guddaan garuu galma qabaachuudha. Galma kaawwannaan sana booda karoora ittin galma kawwattan geessan baastanii hojiitti hiikuu dandeenyaan wanti isin hin milkoofneef hin jiru.
Yoo waq jedhe gara baqaqsanii yaaluutti adeemaan jira. Damee baqaqsanii yaaluu keessaa ammoo gara barnoota waldhaansa balaa tasaatti galuufin karoora qaba.
Qabxiin Dr. Sanyiin galmeesise kun mana barnootaa meedikaalaa Yunivarsiitii Finfinneefi manneen barnootaa biyyattii keessa jiran keessatti isa olaanaa akka ta'e Manni Barnoootaa Meedikaalaa Yunivarsitii Finfinnee beeksiseera.
1 Hagayya 2021
Akkamitti akka barnooti Herregaa ammayaa mana kitaabaa Islaamaa keessaa bahe
Yeroo dhuma kan haaromfame: 28 Guraandhala 2021
Yeroo dhuma kan haaromfame: 18 Fuulbaana 2017
Saatalaayit Intarneetiin maali? Akkamiin dalaga?
Yeroo dhuma kan haaromfame: 27 Amajjii 2021